Chelsea waxay ka badisay Man U - BBC Somali
Chelsea waxay ka badisay Man U
2 Maarso 2011
Kooxda kubadda cagta Chelsea, oo haysata koobka England Premiership ee sanadkii hore, ayaa ka adkaatay kooxda Man U oo ay ku kulmeen cayaar ka mid ah tartankan. Waxaa lagu cayaarayay garoonka kooxda Chelsea.
Chelsea 2-1 ayay ugu awood sheegatay kooxda Manchester United.
Waxaa goolka ku hormaray Man U oo Rooney uu goolka u dhaliyay, goolkaas oo lagu kala nastay iyadoo Chelsea aysan waxba dhalin.
Qaybtii labaata ayaa Chelsea gool barbardhac ah uu u dhaliyay cayaaryahankooda cusub David Luiz, iyadoo rigoore ay heshay Chelsea uu gool u badalay cayaaryahanka Lampard.
Chelsea waxay hadda soo gashay booska ama kaalinta afaraad oo ay kala wareegtay Tottenham, waxay Chelsea leedahay 48, iyadoo 12 dhibcood ka hoosaysa hogaamiyayaasha horyaalka ee ay ka adkaadeen Manchester United.